Fixiinsi Sanyii Jaarraa Toikko Booda Ameerikaa Keessatti Yaadatamee Oole
Waxabajjii 01, 2021
Prezidaant Joo Baayiden kibxata har’aa gara Tulsaa Oklahoomaatti kan imalan fixiinsa sanyii waggaa 100ffaa Tulsaa keessatti raawwatame kan jamaan warren adii bara 1921 hawaasa warren gurraachaa mancaasuu dhaan namoota 300 ajjeesanii kanneen 10,000 ta’an mana jireenyaan ala taasisan yaadachuuf jecha.
Baayiden waaltaa aadaa Greenwood daawwachuu dhaan ijaarsa isaa waggaa 100ffaa irratti haasaa dhageessisuuf jiru.
Hanga guyyaa har’aatti Tulsaa keessatti kan raawwatameef haleellaa poolisoonni sabxiqqaalee irratti raawwatan, wal caalmaa dinagdee, qeeqxonni akka jedhanitti uggura sagalee kennuu ilaalchisee seerri haara ba’e, sagalee warren Ispaanishii fi gurraachotaa murteessuuf jecha jedhan. Kana ilaalchisee lammiiwwan Ameerikaa hedduun hubannoon qaban xiqqoo dha.
Baayiden ennaa isaan yaadannoo Ebla 31 – Waxabajjii 1 bara 1921 sanaaf magaalaa kibba gama dhiyaa Yunnaayitid Isteetis kan uummanni 400,000 keessa jiraatu ga’an muuziyemiin haaraan seenaa sana ibsu banamuuf jira.